आफ्ना नागरिकबिरुद्द मुद्दा चलाउने भनेपछि, चीनले खोल्यो मुख र निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आफ्ना नागरिकबिरुद्द मुद्दा चलाउने भनेपछि, चीनले खोल्यो मुख र निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति !
आफ्ना नागरिकबिरुद्द मुद्दा चलाउने भनेपछि, चीनले खोल्यो मुख र निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति !
काठमाडौं- कोरोनाका कारण देशमा लकडाउन जारी रहेको समयमा शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबारमा झ’डप भयो । घर फर्कन माग गर्दै असनमा सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि बसेका चिनियाँ नागरिक र प्रहरीबीच झ’डप भएको हो । घर फिर्ताको माग गर्दै धर्ना दिएका उनीहरु सिंहदरबार भित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । २५/३० जनाको संख्यामा रहेका चिनियाँहरु सिंहदरबार भित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि झ’डप भएको थियो । ‘चिनियाँहरु भित्र पस्न खोजे, त्यसपछि केही बल प्रयोग गरिएको हो’, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने ।
झडपमा परि केही चिनियाँ नागरिक र नेपाल प्रहरीका डीएसपीसमेत घाइते भएका छन् । चिनियाँले हानेको ढुंगा लागेर महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका डीएसपी हरि बस्नेत घाइते भएका हुन् ।
झडप भएपछि प्रहरीले त्यस छेउछाउमा रहेका प्रदर्शन गरिरहेका ४७ चिनियाँ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर नगर प्रहरी कार्यालयमा राखेको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण जारी लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएको र आफूहरुलाई घर पठाउन नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावासले चासो नदिएपछि उनीहरु सिंहदरबार अघि धर्ना बसेका थिए । त्यसअघि उनीहरु बिहीबार भृकुटीमण्डपमा रहेको पर्यटन बोर्डको कार्यालय अघि धर्ना दिन पुगेका थिए ।
नेपाल प्रहरीमाथि हात हाले
आफ्नो देश जान पाउँ भन्दै सिंहदरबार अघि हातमा ‘आई वान्ट टु गो होम, ‘ नो मनी, निड गो होम’ लगायतका प्लेकार्ड लिएर बसेका उनीहरुलाई सुरुमा प्रहरीले निषेधित क्षत्रबाट हटाउन खोजेको थियो । ठेलमठेल भइरहँदा एक जना चिनियाँ नागरिकले प्रहरीको बर्दी समाएर ताने । त्यसपछि विवाद थप च’र्कियो । हटाउन आएका नेपाल प्रहरीमाथि चिनियाँहरु आ’क्रम’णको शैलीमा उत्रिए । प्रहरीले संयमता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि चिनियाँहरु आ’क्राम भए । चिनियाँहरुले प्रहरी अधिकारीको बर्दी तान्ने गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो ।
एक चिनियाँ महिलालाई ल’ठ्ठी चा’र्ज गरेसँगै केही चिनियाँ प्रहरीमाथि जा’इलागे । पछि प्रहरीले बल प्र’योग गरेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । एसएसपी ज्ञवालीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई जानकारी गराउने बताए । ‘हामीले उनीहरुलाई पठाउने होइन, अब हामीले यसबारे चिनियाँ दूतावासलाई जानकारी पठाउने हो,’ उनले भने ।
यसै क्रममा प्रहरीमाथि हा’तपा’त गर्ने ४ जना चिनियाँ नागरिकलाई अ’भद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइने भएको छ । ४ जनालाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४को अ’भद्र व्य’वहार कसुरमा मुद्दा चलाएर बाँकी ४३ जनालाई रिहा गर्न लागिएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ ।
यहि घटनालाइ लिएर चिनियाँ दुतावासले पनि बिज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो धारणा राखेको छ । चिनियाँ दूतावासले सिंहदरबार अगाडि आफ्ना नागरिकको प्रदर्शनबारे नेपाल प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेर छलफल भइरहेको जनाएको छ।प्रहरीमाथि जाइलाग्ने चार जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारीपछि दूतावासले शुक्रबार राति पौने ११ बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनाप्रति जानकार रहेको जनाएको हो।
चिनियाँले नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने पक्षमा चीन वकालत गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उचित मागबारे भने नेपाल सरकारले ध्यान दिने भन्ने विश्वास लिएको जनाइएको छ। उसले आफ्ना नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान लामो समय स्थगन हुँदा घर जान हतारिएको जनाएको छ। नेपालमा रहेका चिनियाँको संख्या ठूलो रहेकाले चार्टर्ड उडानमा जान नपाएकाहरू जाने प्रयत्नमा रहेका जनाइएको छ। चीनले ३ सय ४० जनालाई लगिसकेको छ।
सीमित उडानका कारण धेरै चिनियाँ अझै नेपालमा रहेको जनाउँदै दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई संयम हुन भनेको छ। महामारीको यो कठिन घडीमा यस्ता घटनालाई संयुक्त रूपमा सम्हाल्दै अघि बढ्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आज हरितालिका तीज, तर अबस्था अर्कै …
त्रिविबाट भूगर्वशास्त्रमा स्नातकोत्तर उतिर्ण मनिला खतिवडालाई बचाउनुहोस्
२० भारतीय सनिकको मृत्युलगत्तै चीनले चाल्यो फेरी यस्तो ठुलो कदम, भारतको रुवावासी, विश्व नै चकित